OTU ESI EME AKWUKWO N'IME OKWU - OKWU - 2019
Ime akwukwo na akwukwo Microsoft.
ODT (Mepee ederede ederede) bụ ihe analogue n'efu nke usoro formats DOC na DOCX. Ka anyị lee ihe omume dị maka imeghe faịlụ site na ndọtị a kapịrị ọnụ.
Ikwunye ODT faịlụ
Nyere na ODT bụ otu okwu nke formats Okwu, ọ gaghị esiri ike ịkọ na ndị nhazi okwu nwere ike iji ya rụọ ọrụ na mbụ. Na mgbakwunye, ọdịnaya nke akwụkwọ ODT nwere ike ile ya anya site n'enyemaka ụfọdụ ndị na-ekiri ụwa.
Usoro 1: Onye edemede ederede OpenOffice
Nke mbụ, ka anyị lelee otú ị ga-esi agba ODT ọsọsọ na otu onye na-edepụta ihe na-edeputa ederede, nke bụ akụkụ nke ngwaahịa OpenOffice. Maka onye edemede, usoro a kapịrị ọnụ bụ isi, ya bụ, usoro ihe omume ahụ na-emejọ iji chekwaa akwụkwọ na ya.
Download OpenOffice maka n'efu
Mwepụta OpenOffice ngwugwu ngwaahịa. Na mmalite window, pịa na "Meghee ..." ma ọ bụ pịa pịa Ctrl + O.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe na menu, wee pịa ya. "Njikwa" na site na ndepụta nke na-egosi, họrọ "Meghee ...".
Itinye ihe omume ọ bụla a kọwara ga-arụ ọrụ ahụ. "Meghee". Anyị ga-ebugharị ya na ndekọ ebe ebe ODT lekwasịrị anya. Dee aha na pịa "Meghee".
E gosipụtara akwụkwọ ahụ na windo ederede.
Ị nwere ike ịdọrọ akwụkwọ si Windows Explorer na windo oghere OpenOffice. N'otu oge ahụ, a ga-ejiri bọtịnụ akaekpo aka ekpe. Ihe a ga-emeghe faịlụ ODT.
Enwere nhọrọ maka ijikwa ODT site na interface nke ederede onye edemede.
Mgbe onye edemede edere mepee, pịa aha. "Njikwa" na menu. Site ndepụta gbasaa, họrọ "Meghee ...".
Omume ndị ọzọ na-egosi na ịpị akara ngosi ahụ "Meghee" n'ụdị folda ma ọ bụ jiri nchikota Ctrl + O.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emepe windo ahụ maara nke ọma. "Meghee"ebe ịkwesịrị imezu otu usoro ahụ dịka akọwara na mbụ.
Usoro 2: Onye edemede dere LibreOffice
Usoro ozokwa ọzọ nke isi ODT usoro bụ ngwa ederede si na LibreOffice office suite. Ka anyị hụ otú iji ngwa a na-ele akwụkwọ na usoro a kapịrị ọnụ.
Download LibreOffice maka n'efu
Mgbe ịmalitere LibreOffice malite windo, pịa aha ahụ "Mepee Njikwa".
Ihe a n'elu nwere ike dochie anya na ịpị aha na menu. "Njikwa", na site na ndetu ndepụta, ịhọrọ nhọrọ "Meghee ...".
Ndị nwere mmasị nwekwara ike itinye nchikota Ctrl + O.
Mgbape ngosi ahụ ga-emeghe. Na ya, gaa na folda ebe akwụkwọ ahụ dị. Họrọ ya wee pịa ya. "Meghee".
ODT faịlụ ga-emeghe na window LibreOffice.
I nwekwara ike ịdọrọ faịlụ site Onye nduzi na window mmalite nke LibreOffice. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-apụta ngwa ngwa na windo ngwa akwụkwọ edemede.
Dị ka onye na-eme usoro okwu mbụ, LibreOffice nwekwara ikike ịmepụta akwụkwọ site na Njikọ ederede.
Mgbe ị na-emeghe onye edemede FreeOffice, pịa akara ngosi ahụ. "Meghee" n'ụdị folda ma ọ bụ mee ka Nchikota Ctrl + O.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe site na menu, pịa na caption "Njikwa"wee dezie ndepụta "Meghee ...".
Ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a chọrọ ga-eme ka windo oghere ahụ pụta. A kọwapụtara na ya mgbe ị na-achọpụta algorithm nke omume n'oge mbido ODT site na windo mmalite.
Usoro 3: Microsoft Word
A na-akwado akwụkwọ mmeghe na ODT agbakwunyere site na ihe omume Word na-ewu ewu site na ụlọ ọrụ Microsoft Office.
Download Microsoft Okwu
Mgbe ịmalite Okwu ahụ, kwaga na tab "Njikwa".
Pịa na "Meghee" na sidebar.
Ihe abụọ a dị n'elu nwere ike dochie ya na bọtịnụ dị mfe. Ctrl + O.
Na windo maka ịmepe akwụkwọ, gaa na ndekọ ebe ebe faịlụ ị na-achọ bụ dị. Mee ya nhọrọ. Pịa bọtịnụ. "Meghee".
Akwụkwọ ahụ ga-adị maka nlele ma dezie site na Okwu Okwu.
Usoro 4: Onye nyochaa ihe niile
Na mgbakwunye na mmepụta okwu, ndị na-ekiri ụwa niile nwere ike ịrụ ọrụ na usoro ọmụmụ ahụ. Otu n'ime mmemme a bụ Universal Viewer.
Ibudata Onye Viewer
Mgbe ị kwụsịrị Universal Viewer, pịa akara ngosi ahụ. "Meghee" dị ka folda ma ọ bụ tinye otu a maara nke ọma Ctrl + O.
I nwekwara ike dochie omume ndị a site na ịpị na caption "Njikwa" na menu wee gaa n'ihu "Meghee ...".
Ihe ndị a na-eduga ntinye nke windo oghere nke ihe ahụ. Gaa na nchịkọta draịvụ ike ebe ebe ODT dị. Mgbe ịhọrọ ya, pịa "Meghee".
E gosiputara ọdịnaya ederede n'ime window Viewer Universal.
Enwere ike ịmalite ODT site na ịdọrọ ihe si Onye nduzi na window mmemme.
Mana ekwesiri iburu n'uche na Universal Viewer ka n 'uwa nile, obughi ihe omuma. Ya mere, mgbe ụfọdụ, ngwa ahụ akọwapụtara adịghị akwado ODT niile, na-emehie mgbe ị na-agụ ihe. Na mgbakwunye, n'adịghị ka mmemme mbụ, na Universal Viewer ị nwere ike ile ụdị faịlụ a, ma ọ bụghị idezi akwụkwọ ahụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, faịlụ ODT nwere ike ịme ihe site n'iji ọtụtụ ngwa. Ọ kachasị mma maka nzube ndị a iji okwu ndị a pụrụ iche na-emepụta nke gụnyere na OpenOffice, LibreOffice na Microsoft Office. Ma nhọrọ abụọ mbụ ahụ bụ ọbụna mma. Ma, n'ọnọdụ ndị dị oke, iji lee ọdịnaya ahụ, ị ​​nwere ike iji otu ederede ma ọ bụ ndị na-ekiri ụwa niile, dịka ọmụmaatụ, Universal Viewer.
Savefrom.net maka Mozilla Firefox nchọgharị
Inye otu cursor yiri obe na ngalaba nke AutoCAD
Mee nseta ihuenyo nke ihuenyo na Lightshot
Kedu otu esi ewue eserese na Okwu?
Mmemme maka ikesa Wi-Fi na laptọọpụ
MKV (nke a ma ama Matryoshka ma ọ bụ Sailor) bụ otu ihe mgbasa ozi na-ewu ewu, nke a na-eji ọsọ ọsọ, na-eguzogide njehie dịgasị iche iche, yana ike ịdebe ọtụtụ faịlụ n'ime akpa ahụ. Ọtụtụ ndị ọrụ, nbudata fim na usoro MKV na kọmputa, na-eche ụdị ụdị mmemme ọ ga-emeghe. GụKwuo
Esi edozi iTunes njehie na iTunes Library.itl
Ebee ka ị na-ekiri ihe nkiri na eserese na ntanetị: ihe iri na ise gosiri
https://termotools.com ig.termotools.com © Okwu 2019